Dhaqdhaqaaqyo Lagu Saluugsan Yahay Hawl Qabadka Dawlada Hoose Ee Hargeysa Oo Ka Bilaabmay Caasimada
(Hadhwanaagnews) Wednesday, February 14, 2018 18:35:41
Hargeysa(HWN):-dhaq dhaqaaqyo lagu saluubsan yahay habacsanaan xildhibaanada golaha deegaanka iyo guddida fulinta ee caasimada ayaa ka bilawday magaalada Hargeysa.
Dhaq dhaqaaqyadan oo ay horkacayaan dhalinyaro ku midoobay urur la baxay hiilka caasimada.
Xubnaha ururka ku midoobay ayaa soo bandhigay ujeedooyinka uu ururkani u taagan yahay iyo waxyaabaha uu qaban doono, waxaanay ku sharaxeen war murtiyeedkan.
Ujeedada Loo Aas Aasay.
Ujeedada loo asaasay ururkan ayaa masuuliyiinta iyo xubnaha kooxdaasi ku sheegeen in loo sameeyey qodobada ay ka mid ka yihiin:
Ururka Hiilka Caasimadda, waa mid aan macaash dooon ahayn kana madaxbanaan siyaasada isla mar ahaantaana aan dawli ahayn, kana shaqeyndoona horumarka
HIMILOOYINKA IYO HANAANKA HAWLGALKA URURKA
Himilooyinka Ururka (Vision statement)
Himilada ururka Hiilka Caasimaddu waa u-kicidda iyo isku-xilqaanka wax-ka-qabashada iyo talo-bixinta baahiyaha dadweyne ee ka jira caasimadda; sida caafimaadka, waxbarashada, korontada,biyaha, jidadka; iyo kor u qaadida bilicda caasimadda.
Hanaanka hawlgalka Ururka (Mission statement)
Ururakani waxa uu u taagan yahay kor u qaadista iyo wax ka qabashada arimaha kor ku xusan, isagoo u diyaarinaaya barnaamijyo iskaa wax u qabso ah.
UJEEDOOYINKA URURKA (OBJECTIVES)
Ujeedooyinka ururka waxa kamida
In la abuuro jawi isku xidh dhalinyarada caasimadda iyo dhamaan gobbolada kale ee dalka, lana sameeyo dalad guud oo ah Hiilka Qaranka Somaliland, taas oo ka shaqayn doonta dhamaan baahiyaadka goboladda dalka.
Ujeedada ururku kaliya mahaa wax ka qabasho baahi kasta, ee sidoo kale waa toosinta, talo-bixinta iyo soo bandhigista dhammaan baahiyaha dadwaynaha Somaliland.
MABAADIIDA GUUD EE URURKA (GENERAL VALUES OR PHILOSOPHY)
Isku soo wada duubo dhaqdhaqaaqan ayaa noqon doona kii ugu baaxada weynaa ee ay ku kulmaan dhalinyaro heer jaamici ah oo masiirka guud ee mideeyey uu yahay sidii Hargeisa ay u noqon lahayd Hargeisa xaqeeda ku hesha cashuurta ay bixiso ee danyaraheeda laga qaado.
Sida aynu la socono gollaha deegaanka ee Hargeisa waa kan ugu dakhliga badan guud ahaan golayaasha dalka waana mid maamula baahiyadka asaasiga ah ee guud ahaan caasimada sida waxbarashada, cafimaadka iyo amaanka degmooyinka, lakiinse intii ay hayeen talada gollahan dhalinyaradii la soo doortey 5 sanno ka hor inay noqdaan kuwo maamuskii iyo magacii ay lahaydba ku loofaray warkooduna noqday ” nin yari intuu talo ka booduu, laan ka booda”.
25 xildhibaan ee loosoo xulay inay noqdaan adeegayaal bulsho ayaa guud ahaan isu bedelay inay noqdaan kuwa ku macaasha kuna shaqaysta xilalkii loo igmaday isaga oo xildhibaan waliba soo dhameeyey wixii dan guud degmadiisa laga soo helay.
Ugu dambayn dhaqdhaqaaqyada ay dhalinyaradani wadaan ayaa ah sidii ay u ururin lahayeen petition ama saxeexyo dhan 5000 oo qof oo ka mid ah shacabka caasimada si soo jeedin iyo la xisaabtan maamus ka xayuubineed loogu sameeyo xubnaha ku tagri falay mansabyadii loo igmaday.
Waxaanay kooxdani ugu baqeen madaxweynaha Somaliland inuu ka dhabeeyo balantiisii ahayd adkaynta sharciga dhagtana ku hayo gurmadada tirada badan ee go’aan qadashada iyo cadalada leh ee dalku ka dhawrayo.